Waliigaltenii ABO fi ODP giduu halaagariinii xumuramerraa gadanii gadaa tokkummaatii ijnifanoonii umattaa oromotii. – Kichuu
ODUU#Breaking News Walahii akkanumatu isin irraa bareddaa
ODP fi ABOn waliigaltee isaanii cimsuun rakkoo mudatu hunda waliin furuufii waliin hojjechuuf waliif-galan.
Hooggantoonni Paartilee lameenii har’a ibsa waloo kennaniiru .
I/A Dura taa’aa ODP fi Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan ABO waliin guddina biyyaatii kanaatiif kanaan booda waldhaggeeffachaa waliigalteen akka hojjetan dubbatan.
HD-ABO Obbo Dawud Ibsaa waliigaltee Asmaraatti irra gahan hojiirra oolchuun ODP waliin hojjechuuf qophii ta’uusaanii dubbataniiru.maddi OBN Afaan Oromoo
News Update: Addi Bilisummaa Oromoo fi mootummaan Naannoo Oromiyaa waliin hojjechuuf waliigalan, @OBNOromiyaa
“#OLF and #Oromia regional state have agreed to work together” https://t.co/JcgAnnC1sv#Ethiopia #Oromia pic.twitter.com/E7Re9S1NQv
— Addis Standard (@addisstandard) November 14, 2018
ODP fi ABOn waliin hojjechuuf waliigalan.
I/A Dura taa’aa ODP fi Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi Hayyu-dureen ABO Daawud Ibsaa ibsa waloo kennaniin, kana booda waldhaggeeffachuun guddina biyyattiif hojjenna jedhaniiru.
Akka gabaasa OBNtti, Obbo Daawud Ibsaa waliigaltee Asmaraatti irra gahan hojiirra oolchuun ODP waliin hojjechuuf qophii ta’uusaanii dubbataniiru.
Kana malees, waan nu harkaa bahaa ture waliin sirreessaa gara fuulduraatti walta’insaa fi akeeka jaarsoliin lafa kaa’aniin waloodhaan ni hojjennas jedhaniiru.
Kanumaafis, miseensonnii fi deeggartoonni ABO kana fudhatanii tasgabbiin Oromiyaa akka eegan dhaaman.
Humni kanaan dura waraana ABO ture qaama mootummaa ta’ee mootummaa Naannoo Oromiyaatiif humna dabalataa akka ta’u gochuuf waliigaluus dubbatan.
Pireezidant Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin jaarmiyaaleen siyaasaa waraana tokko malee nagaan waliin qabsaa’uun, sagantaa siyaasaa ofii tarkaanfachiisuu danda’uun nageenya biyyaatiif murteessaa ta’uu akka amanan himaniiru.
Odeessaalee biroof bbcafaanoromoo.com mil’adhaa
Suuraan Getty Images irraa argame.
ABO Fi ODPn Walii Faltee Kana Dura Eeritiraa,Asmaraatti Taasisan Osoo Irraa Hin Sharafne Hoojirra Oolchuuf Marii Har’a Sad.14/2018 Finfinnee Waajjira Pireezidaantii Naannoo Oromiyaattii Taasisaniin Walii Galan.
Kaayyoon Keenya Ummata Keenya Fedhii Fi Dantaa isaa Tiksuudha,Nageenyaa Isaa Amansiisaa Taasisuudhas Jedhaniiru.
Aadam Mohaammad**Gadaan Keenya** New Oromo Music 2018 By Raya studio
Oromo music : Badhaatu Abbuu (Jajjabee) – New Ethiopian Oromo Music 2018(Official Video)
Kekiya Badhadha – Dhugaa Maseenaaree!! – New Ethiopian Oromo Music 2018 (Official Video)
OBN Sad 05, 2011 – ODP fi ABO waliigalteesaanii cimsuun rakkoo mudatu waliin furaa waliin hojjechuuf waliigalan. Hooggantoonni Paartilee lameenii har’a ibsa waloo kennaniiru. I/A Dura taa’aa ODP fi Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan ABO waliin guddina biyyaatiif kana booda waldhaggeeffachaa waliigalteen akka hojjetan dubbatan. Hayyu Dureen ABO Obbo Dawud Ibsaa waliigaltee Asmaraatti irra gahan hojiirra oolchuun ODP waliin hojjechuuf qophii ta’uusaanii dubbataniiru.